Archdiocese of Mandalay blog: မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၁၃)
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၁၃)
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၁၂)
Fr.Jean Biptiste Remandet (Paris Foreign Mission Society)
ဖါသာရ်ရေမန်းဒက်သည် (၁၈၆၇)ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၃)ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ပြည်၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ (၁၈၉၃) တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ၁
ဆရာတော်ကြီးအုစ်၏ လမ်းညွှန်မှုအရ ဖါသာရ်ရေမန်းဒက်သည် ဖါသာရ်ဟဲကို ကူညီရန် ရွှေဘိုမြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ (၁၈၉၅)ခု တနေ့တွင် ရွှေဘိုမြို့ အနောက်ဘက် (၆)မိုင်ခန့်ဝေးသော ဦးသံခဲနှင့် ဦးသံရောင် နှစ်အိမ်ထောင်သာ ရှိသော ညောင်ချင်ပင်ရွာသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဦးသံခဲ ဦးသံရောင်တို့နှင့် တစတစ ရင်းနှီးလာခဲ့သည်။ ဖါသာရ် ရေမန်းဒက်သည် ဆေးပညာတတ်ကျွမ်းသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မကျန်းမာသူများအား ဆေးကုသပေးခြင်း ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်သူများအား ခရစ်ယာန်မေတ္တာတရားအရ ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း တို့ကြောင့် ဘုန်းတော်ကြီးအား ပတ်ဝန်းကျင်က ကြည်ညို သဒ္ဓါပွါးပြီး အားကိုးအားထား ပြုလာကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် ညောင်ချင်ပင်ရွာနှင့် တစ်မိုင် (၃) ဖါလုံခန့် ဝေးသော ပန်းရံရွာမကြီးမှ ဦးကျယ် ခေါင်းဆောင်၍ ဆင်းရဲသား (၁၆) အိမ်ထောင်စုတို့သည် ညောင်ချင်ပင်ရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့ကြသည်။ ယခင် အိမ်ထောင်စုနှစ်စုသာ ရှိသောညောင်ချင်ပင် ရွာလေးသည် ယ္ခု (၁၆)အိမ်ထောင် တိုးလာသဖြင့် (၁၈)အိမ်ထောင်ရှိသော ရွာတစ်ရွာ ဖြစ်လာသည်။ ပရံရွာကြီးမှ ပြောင်းရွှေ့လာရောက် နေထိုင်ကြသောကြောင့် ပရံရွာသစ်ဟုလည်း ခေါ်သည်။ ဖါသာရ်ရေမန်းဒက်သည် ပရံရွာမကြီးမှ ပြောင်းရွှေ့လာသော အိမ်ထောင်စုများကို ပျူပျူငှါငှါ လက်ခံ ကြိုဆိုသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးသည် ယခင်ရှိနှင့်ပြီး ဦးသံခဲနှင့် ဦးသံရောင် အိမ်ထောင်စု (၂)စုအပြင် ပရံရွာမကြီးမှ ပြောင်းရွှေ့လာကြသော အိမ်ထောင်စုများအတွက် ခရစ်ယန် အယူဝါဒ သင်ကြားပေးရန် ဦးပုအား ဓမ္မဆရာခန့်သည်။ ဦးပုသည် ရွာသားများအား ဘုရားစကား သင်ကြားပေးသည်။ရွှေဘို ကျောင်းထိုင်နယ်အုပ် ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ်ဟဲသည် ညောင်ချင်ပင်ရွာမှ ဆင်းရဲသားများအား အိုးအိမ် ထူထောင်ပေးသည်။ အိမ်ထောင်စု အလိုက် လှည်း နွား လယ်ယာ ကိုင်းကျွန်းများ ၀ယ်ပေးသည်။ တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေးအတွက် မတည်ပေးခဲ့သည်။ (၁၈၉၆) ခု စက်တင်ဘာလ (၁၀)ရက် နေ့တွင် ညောင်ချင်ပင် ရွာသူရွာသား (၃၉)ဦးအား မန္တလေးမှ ဆရာတော် ဘိရှော့အုစ် ကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ ပထမဆုံး ဆေးကြောခြင်း ပေးခဲ့သည်။ထိုအချိန်မှစ၍ ညောင်ချင်ပင်ရွာကလေးသည် ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်ရွာ ကလေးတစ်ရွာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ယခုအခါ ညောင်ချင်ပင်ရွာဟု လူသိနည်းပြီး ရွာတော်ရွာဟုသာ လူုသိများခဲ့သည်။ ဖါသာရ် ရေမန်းဒက် တည်ထောင်ခဲ့သော ညောင်ချင်ပင်(ရွာတော်)ရွာကလေးသည် ယ္ခုအခါ ရွှေဘိုမြို့နယ်တွင် ကက်သလစ် ဘာသာဝင် (၁၀၀၀)ကျော်ရှိသော ရွာကြီးတရွာ ဖြစ်နေပေပြီ။ ဖါသာရ်ရေမန်းဒက်သည် (၁၈၉၅) မှ (၁၉၀၀) ပြည့်နှစ်အထိ ညောင်ချင်ပင် ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူခဲ့သည်။ ဖါသာရ်ရေမန်းဒက်သည် ဖါသာရ်ဟဲ၏ လက်ထောက် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်နှင့် ရွှေဘိုဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူရသည့် အပြင် မုံလှရွာကိုလည်း ကြည့်ရူရသည်။ ၂
ဖါသာရ် ရေမန်းဒက်သည် (၁၉၀၇)ခုတွင် ချောင်းဦး ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ရောက်ရှိလာသည်။ချောင်းဦးသို့ ရောက်ပြီးနောက် ဦးစန္ဒာက လှူဒါန်းငွေဖြင့် ဘုန်းကြီးနေကျောင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။
သင်္ချိုင်းကျောက်စာ ကျောင်းတကာ ဦးစန္ဒာကူ
စစ်ကိုင်းမြို့ အပါ ချောင်းဦးရွာတွင် ကျောင်းတကာ ဦးစန္ဒာသည် ဇာတိသန့်စင် ဖွားမြင်ငှါ နောက် အချိန်အရွယ်သို့ ရောက်လျှင် ရှာကြံရသော ပစ္စည်းရပ်များကို မိမိ၏ အစွမ်းသတ္တိကြောင့် မဟုတ် ဘုရားသခင် ကျေးဇူးတော် ဂုဏ်လှူ ခံစားရ၍ ရငြားသော ပစ္စည်းများကို ဘုရားသခင်အား ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း သဒ္ဒါတရား နှလုံးထားပြီးလျှင် ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်စာလှယ်တော် ရဟန်းတော် အဆက်ဆက် မပျက် သီတင်းသုံးတော်မူရန် တိုက်ကျောင်းကို ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းပူဇော်ပြီးလျှင် ကျောင်းတကာ ဦးစန္ဒာသည် အသက်(၄၁)နှစ် အစ၏ မရဏဇူဝန် ဆုံးသွန်လေးပါး မြတ်တရားတွင် ဘုရားမိန့် သံဗျာဒိတ်ခံ၍ သက္ကရာဇ် (၁၂၇၀)ပြည့် ၀ါခေါင်လဆန်း လ၏ (၁၀)ရက်တွင် ဘ၀တပါး လိုက်သွားရာ ကြွင်းကျန်တုံရှောင်း ရုပ်အလောင်းကို ကျောင်းအမ မရွှေညွှန့်က အမျိုးထုံးတမ်း နည်းလမ်းအရ လှပကောင်းမွန်စွာ ဖုံးလွှမ်းသင်္ဂြိုလ် ပါကြောင်း ၄င်း ကျောင်းတကာအတွက် သားစဉ် မြေးဆက်မပျက် မေတ္တာပို့ကြပါ။ ၃
ဖါသာရ် ရေမန်းဒက်သည် ချောင်းဦးသာသနာတွင် ပါဝင်သော မုံရွာ ဘာသာဝင်များကိုလည်း ကြည့်ရူရသည်။ ဖါသာရ်ရေမန်းဒက်သည် မုံရွာမြို့၌(အလျား ၇၀ပေ x အနံ ၂၈ပေ x အမြင့် ၃၅ပေ ရှိသော ဂေါသစ်ပုံစံ စိန်ဂျိုးဇက်ဘုရားကျောင်းကို ခေါင်းလောင်စင်ပါ ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ပြတင်းပေါက် (၁၈)ပေါက် ပါဝင်သည်။ လေးထောင့်ပုံ ခေါင်းလောင်းစင်မှာ ပေ(၉၀) မြင့်သည်။ ဘုရားကျောင်း ကုန်ကျငွေကို ဗီဒဗလျူဒီမှ မစ္စတာ ဂျီဂျေဖရန်စစ်တို့က ပေးလှူသည်။ ၄
ဘုန်းကြီးနေရန် (၂)ထပ်ကျောင်းကိုလည်း ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ဘုန်းကြီးနေ ကျောင်းနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် (၃)ခန်းတွဲ ဇရပ်ကြီး တစ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ဦးဘိုးခန့်ဆိုသူကို ကျောင်းစောင့်အဖြစ် ထားသည်။ ၅
ဖါသာရ် ဂျီးရိုး လက်ထက်တွင် ချောင်းဦး၌ ဘာသာဝင် အိမ်ခြေ (၅၀)ခန့်သာရှိ၍ ဖါသာရ် ရေမန်းဒက် လက်ထက်တွင် အိမ်ခြေ (၉၀)ထိ တိုးတက်လာပြီး ဘာသာဝင် ဦးရေ (၄၀၀)အထိ ရှိခဲ့သည်။ ဖါသာရ်ရေမန်းဒက်သည် ချောင်းဦး၌ အုတ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ဆောက်လုပ်ရန် စီစဉ်နေစဉ် မော်လိုက်မှ အပြန် ငှက်ဖျားမိ၍ (၁၉၂၄) ခု သြဂုတ်လ (၁၇)ရက်နေ့တွင် ချောင်းဦး၌ ပျံတော်မူသည်။
၁။ The list of foreign Missionaries
၂။ ဦးဂျိုးဇက် (ရွာတော်)၏ မှတ်တမ်း။
၃။ The Voice 1.5.104
၄။ ဦးဘိုးသိန်း (မုံရွာ) ၏ပြောပြချက်
၅။ The Voice ,Oct,1924,PP.234-235
Fr.X. Boulanger (Paris Foreign Mission Society)
ဖါသာရ်ဘူးလင်ဂျာသည် (၁၈၆၃)ခု ဇန္န၀ါရီလ (၃) ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ပြည်၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ (၁၈၈၆)ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ၁
(၁၈၈၈) ခုနှစ်တွင် မန္တလေး တမီးလ်သာသနာကို စတင် တည်ထောင်သည်၊ (၁၈၉၀) မှ(၁၈၉၃) ထိ ဖါသာရ်ရစ်ချက်က တမီးလ် ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူခဲ့သည်။ (၁၈၉၃)ခုနှစ်တွင် ဖါသာရ်ဘူးလင်ဂျား ပြန်ရောက်ရှိလာပြီး တမီးလ်လူမျိုး ဘာသာဝင်များအတွက် စိန်ဇေးဗီးယား ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ယင်း ဘုရားကျောင်းကို မန္တလေးမြို့ စိန်ပီတာ ကာသီဒရယ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှ ပစ္စည်းများ ယူ၍ ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ဖါသာရ်ဘူးလင်ဂျားသည် (၁၈၈၇)တွင် စာသင်ကျောင်းဆောက်၍ မူလတန်းကျောင်း စတင် ဖွင့်သည်။ (၁၉၀၀) ပြည့်နှစ်တွင် အလယ်တန်းကျောင်း အဖြစ်သို့ တိုးမြှင့် နိုင်ခဲ့သည်။ကက်သလစ် တမီးလ်အဖွဲ့ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ (၁၈၉၅)တွင် မော်လမြိုင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ သွားသည်။ (၁၉၃၆) တွင် ရန်ကုန် ပဲခူးတွင် အသတ်ခံရသည်။ ၂
၂။(က) Mandalay district Gazetteer ,Vol A.P.176
(ခ) မစ္စတာလော်ရီပေါလ် (စိန်ဇေးဗီးယား) မန္တလေး၏ မှတ်တမ်း
ဖါသာရ် အယ်လ်လဖုန်း (၁၈၆၄-၁၉၄၅)
Fr. L.Lafon. (Paris Foreign Mission Society)
ဖါသာရ် လဖုန်းသည် (၁၈၆၄)ခု ဂျွန်လ (၉)ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ပြည်၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ (၁၈၉၄)ခုတွင် ပီနန်မြို့ရှိ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတကာ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းမှ မြန်မာနိုင်ငံ မန္တလေးမြို့သို့ ရောက်ရှိလာသည်။ ဆရာတော်ကြီး စီမွန် ကြည့်ရူခဲ့သော တရုတ်အမျိုးသား ခရစ်ယာန်များကို ဖါသာရ်လဖုန်းက ဆက်လက် ကြည့်ရူ ခဲ့ရသည်။ မန္တလေးမြို့ တရုတ်တန်းရှိ ဖါသားလဖုန်းကျောင်းကို စိန်ဂျိုးဇက်မိဘမဲ့ကျောင်း အမည်ဖြင့် (၁၈၉၅) ခု စက်တင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့တွင် စတင် ဖွင့်လှစ် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဤအချိန်မှ (၁၉၀၂) ခု အထိ ကျောင်းအုပ်အဖြစ် မစ္စတာအိပ်ခ်ျရှက်ပဲလ်မင်က အုပ်ချုပ် စီမံသည်။ ဖါသာရ်လဖုန်းသည် ကျောင်း အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ရံပုံငွေကို မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားရှာ၍ (၁၉၀၄) ခုနှစ်တွင် (၂၀၀ ပေ x ၃၆ပေ)ရှိသော ကျောင်းကို ဆောက်လုပ် နိုင်ခဲ့သည်။ ဤကျောင်းကို မစ္စတာချားလ်က (၁၉၀၂)ခုမှ (၁၉၃၆)ထိ ကျောင်းအုပ်အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ၄င်း၏ စီမံကွပ်ကဲမှု အောက်တွင် ကျောင်းလုပ်ငန်း အောင်မြင်မှု ရရှိကာ (၇)တန်း အစိုးရစစ်တွင် ရာနှုန်းပြည့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။
ဖါသာရ် လဖုန်းသည် (၁၉၀၁)ခုမှ (၁၉၁၀) ခုအထိ ရွာတော် ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရူ ခဲ့သည်။ (၁၉၁၃)ခုနှစ်တွင် စိန်ဂျိုးဇက် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဆောက်ရန် စတင် ပန္နက်ချခဲ့သည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်ကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ရပ်သွားခဲ့သည်။ (၁၉၂၄) ခုနှစ်တွင် ပြန်လည် တည်ဆောက်ရာ (၁၉၃၃) သြဂုတ်လ (၁၃)ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်သည်။ ဆရာတော်ကြီး ဖါးလီးယေး ဘုရားကျောင်း ကောင်းကြီးပေးသည်။
(၁၉၂၈) ခု သြဂုတ်လ (၅)ရက်နေ့တွင် ဖါသာရ်လဖုန်း တည်ဆောက်ခဲ့သော ဘုန်းကြီးနေကျောင်း စာသင်ကျောင်းနှင့် ကလေးများ ဘော်ဒါဆောင်ကို မီးလောင်ကျွမ်း ခံရသည်။ ဖါသာရ်လဖုန်းသည် မီးလောင်ပြီး ရက်(၂၀) အကြာ (၁၉၂၈)ခု သြဂုတ်လ (၂၅)ရက်နေ့တွင် အာသံနယ် ပရီဖက်အပေါ်စံတော်လစ် အယ်လ်မက်သိုင်းအက်စ်ထံ ဆလေးရှင်း ဂိုဏ်းဝင်များက ဤကျောင်းကို လွဲပြောင်းတာဝန်ယူရန် စာရေးလိုက်သည်။ ဤအတောအတွင်း ပျက်စီး ဆုံးရှုံးသွားသော အဆောက်အဦးများ ပြန်လည်ထူထောင်ရန် ထီလက်မှတ်များ ရောင်းချခဲ့သည် လုပ်ငန်း အောင်မြင်သဖြင့် (၁၉၃၄)ခုတွင် ဘုရားကျောင်း၏ မြောက်ဘက်၌ သံမဏိဘောင်ခံ ကွန်ကရစ်အဆောက်အဦး (၁၅၀ ပေ x ၄၇ပေ) ကို စတင် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် (၁၉၃၄)ခု မေလ (၅)ရက်နေ့၌ ပုလိပ်မင်းကြီး၏ အမိန့်အရ လောင်းကစားမှု အားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်သောအခါ ဖါသာရ်လဖုန်း၏ လုပ်ငန်းများ များစွာထိခိုက် နစ်နာခဲ့သည်။
ဖါသာရ်လဖုန်းသည် အသက်အရွယ် ကြီးရင့်ပြီ ဖြစ်၍ တခြားနည်းလမ်းများ ရှာမရသဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် မသိုင်းအက်စ် ထံစာရေး အကြောင်းကြား ရပြန်သည်။ (၁၉၃၇) ခုနှစ်တွင် ဆလေးရှင်း အကြီးအကဲ ဗီစကူဒေရီသည် သာသနာလုပ်ငန်းနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ခရီးကြွလာရင်း မြန်မာနိုင်ငံ မန္တလေးမြို့သို့ ရောက်လာခဲ့သည်။ (၁၉၃၉) ခု ဇန်န၀ါရီလ (၂၈)ရက်နေ့တွင် ဆလေးရှင်းဂိုဏ်းမှ အကြီးအကဲအဖြစ် ဖါသာရ်အာလက်ဆီနှင့် ဖါသာရ်ဘောဒင်း၊ ဖါသာရ်ဂျက်ကောမင်း၊ ကိုရင်ဂျိုးဇက်၊ ကိုရင်ဒါလာဂျား၊ ကိုရင်ဘွန်ဂျောနိူးတို့ ရောက်လာကြသည်။ ထိုအချိန်က ကျောင်းအုပ်ကြီးမှာ အိမ်ခ်ျကော်နယ်လီရိုဖြစ်၍ ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစား (၃)ဦးနှင့် နေ့ကျောင်းသား (၁၂)ဦးသာ ရှိတော့သည်။သို့ရာတွင် ဆလေးရှင်းတို့၏ ကြိုးပမ်းမှု့ကြောင့် ထင်ရှားသော ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖြစ်လာသည်။
ဖါသာရ်လဖုန်းသည် (၁၉၂၈) ခု မီးကြီးလောင်စဉ်က စစ်ကိုင်းမြို့သို့ သွားရောက်၍ သာသနာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေရာ မိတ်ဆွေများက သွားရောက် အကြောင်းကြားရသည်။ ဖါသာရ်လဖုန်းသည် အင်းဝနှင့် အမရပူရမြို့များတွင် ရှေးကကဲ့သို့ ဘုရင်ဂျီဘာသာ ထွန်းကားအောင် ဆောင်ရွက်လိုသဖြင့် အင်းဝမြို့တွင် ဘုရင်ဂျီများ နေထိုင်ခဲ့ဘူးသော နေရာဟောင်း အနီးတွင် မြေကွက်ငယ် တစ်ခုဝယ်ပြီး စိန်လေအိုဟူသော ရွာငယ်တစ်ရွာ စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဘုန်းကြီး၏ အသက်ကြီး ရင့်ခြင်း၊ အလုပ်များခြင်း၊ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးနှင့် ကြုံတွေ့နေရခြင်း၊ စသည့် အခက်အခဲများကြောင့် အကျိုး မသက်ရောက်ခဲ့ပေ။အမရပူရမြို့တွင် စိန်ပီတာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအနီး၌ ကျယ်ပြန့်သော မြေကွက်ကို ၀ယ်ယူပြီး ခြံဝင်းခတ်လျက် ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် သာသနာရပ်ကွက် တစ်ခု တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ဖါသာရ်လဖုန်းသည် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း စိန်ဂျွန်း အနာကြီးဆေးရုံတွင် သွားရောက် ခိုလှုံနေရသည်။ (၁၉၄၅) ခု ဇန်န၀ါရီလ (၂၅) ရက် သက်တော် (၈၁)နှစ်တွင် ပျံတော်မူသည်။ စိန်ဂျွန်း ရပ်ကွက်မှာပင် သင်္ဂြိဲုလ်သည်။ဖါသာရ်လဖုန်း၏ သေတမ်းစာအရ (၁၈-၃-၄၆)နေ့တွင် ဘုန်းတော်ကြီး၏် အရိုးစုကို လဖုန်း စိန်ဂျိုးဇက်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ဘုရားစင်၏ အောက်ခန်းတွင် ဂူသွင်း ထားသည်။
Fr. J. Wehinger.(Paris Foreign Mission Society)
ဖါသာရ်ဝင်းဂဲသည် (၁၈၆၄)ခု နိုဝင်ဘာလ (၂၈)ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်ပြည်၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ (၁၈၈၉)တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ၁
ဆရာတော်ကြီးသည် ဖါသာရ်ဝင်းဂဲအား ပုလိပ်နှင့် တစ်မိုင်ခန့်ဝေးသော ချမ်းသာကုန်းတွင် ဖါသာရ်တော် ဘိယ ဟောပြောစည်းရုံး၍ ဘာသာဝင်လာကြသူ မိသားစုများအား အုပ်ချုပ်ရန်နှင့် ဘုရားကျောင်းဆောက်ပေးရန် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ချမ်းသာကုန်း ဘာသာဝင်များသည် မိမိတို့ လက်ဦးဆရာဖြစ်သော ဖါသာရ်တော်ဘိယကို ကြည်ညိုကြသည့် အတွက် နောက်ရောက်လာသောနို င်ငံခြားသား ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ်ဝင်းဂဲကို မလိုလား၍ ကိစ္စတုံးစီရင်ကြရန် ကြံစည်ကြသည်။ တစ်ည၌ လူဆိုးများ ရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာပြီး နိုင်ငံခြားသား မျက်နှာဖြူ ဘုန်းတော်ကြီး ဖါသာရ်ဝင်းဂဲအထင်နှင့် ဖါသာရ်တော်ဘိယနှင့် ကျောင်းသားလေး ပီတာကို ဓားနှင့် ခုတ်ပိုင်းကြသည်။ သေပြီဟုထင်၍ ချက်ချင်း ထွက်ပြေးကြသည်။ လူဆိုးများကို ဖမ်းမိခဲ့ခြင်း မရှိပေ။ ဖါသာရ်ဝင်းဂဲမှာ ဓားခုတ်ခြင်းမှ လွတ်ကင်းခဲ့သည်။ ဖါသာရ် တော်ဘိယရရှိခဲ့သော ဒဏ်ရာများလည်း ကုသ ပျောက်ကင်းခဲ့သည်။ ၂
ဖါသာရ်ဝင်းဂဲသည် (၁၈၉၆) ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့ မနော်ယမံဥယျာဉ်တွင် အနာကြီးရောဂါ ကုဆေးရုံဖွင့်ရန် အတွက် သူနာပြု ဆရာမများရရှိရန်နှင့် အဆောက်အဦးများ ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ဥရောပ တိုင်းပြည်များသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ အနာကြီးရောဂါသည်များ ပြုစုကုသပေးရန် မာရိယား၏ ဖရန်စစ္စကင် သီလရှင်အသင်းက တာဝန်ယူရန် လက်ခံလိုက်သည်။ (၁၈၉၈)ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် ဖရန်စစ္စကင်သီလရှင်များ မန္တလေးသို့ ရောက်ရှိလာကြသည်။ ဖါသာရ်ဝင်းဂဲသည် မန္တလေးမြို့ မနော်ယမံတွင် ကုဌနူုနာလူနာဆောင် (၇) ဆောင်နှင့် ဘုရားကျောင်း အပါအ၀င် သီလရှင်များ၏ ကွန်ဗင့်ကျောင်း ပင်မဆောင်ကြီးကို ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ အနာကြီးရောဂါသည် လူနာဆောင် (၇)ဆောင်ကို (၁၉၀၁) ခု နိုဝင်ဘာလ (၂၈)ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယဘုရင်ခံချုပ်နှင့် ဒုတိယဘုရင်ခံတို့က ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားကျောင်း အပါအ၀င် သီလရှင်များ၏ ကွန့်ဗင့်ကျောင်း ပင်မဆောင်ကြီးကို (၁၉၀၂) ခုနှစ် မတ်လ (၅)ရက်နေ့တွင် ဆရာတော် ကာဒိုးက ကောင်းကြီးပေးပြီး မတ်လ (၂၂)ရက်နေ့တွင် ဒုတိယ ဘုရင်ခံက ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ရာနှင့်ချီသော ရောဂါသည်များအား ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်စေ၍ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ လက်သမား လုပ်ငန်းများ ယက္ကန်းလုပ်ငန်းများ၊ အပ်ချုပ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်စေသည်။ ကလေးများအတွက် စာသင်ကျောင်းများ ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ နောင်တွင် ရောဂါသည် (၂၅၀)ကို အကြီးအကဲတစ်ဦး၊ဆရာဝန်တစ်ဦး၊ သီလရှင် (၂၂)ပါးက ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ် ကုသပေးသည်။ စာသင်ကျောင်းတွင်လည်း ကျောင်းသား (၉၃)ယောက်အထိ ရှိလာခဲ့သည်။ဖါသာရ်ဝင်းဂဲသည် (၁၉၀၃)ခု စက်တင်ဘာလ (၆)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ မနော်ယမံတွင် ပျံတော်မူသည်။ ၂
၂။ The Voice,1925,Oct,P.241
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (အပိုင်း ၁၄)
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 6:27 PM